Momba anay - Shanghai Comi Aroma Co., Ltd.
COMI AROMA dia orinasa mpamatsy fonosana izay naorina tany Shanghai, Sina tamin'ny taona 2010. Foiben-toeran'ny any Shanghai, Factory ao Xuzhou, Sina. Hatramin'ny nanombohany, dia fantatra tamin'ny vokatra avo Flint Glass izahay, kanefa ankehitriny, amin'ny alàlan'ny lafaoro mihoatra ny 25, afaka mandray ny baiko amin'ny endriny rehetra, habe ary loko amin'ny volavola mandavantaona isika. Izany dia ahafahantsika manompo indostria maro isan-karazany ao anatin'izany ny kosmetika, diffuser, ranomanitra, fantsom-boasary ary fanafody, ary tavoahangy mitete. Manome toky izahay fa ny fombanay sy ny tahirinay dia amboarina amin'ny fenitra avo lenta ary misy tsy tapaka amin'ny Amber, Green, Flint, ary Cobalt Blue.
Manokana, COMI AROMA dia mamatsy tavoahangy vera, kaontenera ary kojakoja feno (fantsom-panafody, paompy zavona, paompy famafazana, tsorakazo Fiber, tsora-kazo, sakam-baravarana sy kapila). Miaraka amin'ny traikefa efa am-polony taona maro teo amin'ny sehatry ny fonosana, manolotra vokatra fonosana avo lenta sy manavao ho an'ny marika hatsaran-tarehy sy fikolokoloana hoditra.
Ireo fotodrafitrasa fanamboarantsika manara-penitra, mifanaraka amin'ny fenitra amerikanina ary voamarina US FDA ka afaka mamaly ny filan'ny mpanjifa anatiny sy iraisam-pirenena izahay. Ho fanampin'izay, ny COMI AROMA dia naka teknolojia fandrakofana setroka mafana, haitao famafazana famafazana mangatsiaka farany, ary teknolojia fitsaboana enti-manatsara silikona. Ny trano fanatobiana tongony 100 000+ metatra toradroa izay itahirizanay vokatra mihoatra ny 50 tapitrisa hananana vokatra mba hiantohana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa eo noho eo ary hitazomana fotoana fohy.
Rehefa mitombo hatrany ny COMI AROMA dia ezahinay ny hahatanteraka ny filan'ny mpanjifa rehetra.
Fitsangatsanganana fonosana mahafinaritra, asa mahafinaritra miaraka amin'i COMI AROMA!
Azafady mba mifandraisa aminay amin'ny fangatahana rehetra.